Depay oo meesha ka saaray hadal heynta suuqa kala iibsiga ee Barcelona: Waxaan ku faraxsanahay Lyon
Home Horyaalka France Depay oo meesha ka saaray hadal heynta suuqa kala iibsiga ee Barcelona:...
Memphis Depay ayaa biyo qabow ku shubay wararka xanta ah ee ku aadan inuu u dhaqaaqi doono kooxda Barcelona bisha Janaayo.
Weeraryahanka Lyon ayaa shaaca ka qaaday inuu la sii joogi doono kooxda reer France ilaa maalinta ugu dambeysa ee qandaraaskiisa – oo dhacaya xagaayga – waxaana ay u muuqataa inuu aad u doonayo inuu la xaajoodo Barcelona marxaladdaas marka ay jiri doonto hubin badan.
“Waxaan diirada saarayaa waxa aan ku sameynayo Lyon,” ayuu yiri.
“Ma doonayo inaan wali go’aan gaaro maxaa yeelay waxaan ku dareemayaa wanaag halkaan. Ma doonayo inaan abuuro qas.
“Waxaan heysanay koox wanaagsan, waan jeclahay madaxweynaha, waan arki doonaa waxa dhaca.
“Laakiin aniga iyo madaxweynaha waan ognahay wixii dhacay afartii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
Waxaan sii wadi doonaa inaan ku raaxeysano waxyaabaha sida ay yihiin ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
“Waxa kaliya ee aan ka fikirayaa waa kulanka Sabtida.
Depay ayaa sii waday qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa ee kooxda, isagoo labo gool ka dhaliyay habeenkii Arbacada Lens ee Ligue 1.
Depay ayaa ku dhawaaday inuu u dhaqaaqo Barcelona xagaagii lasoo dhaafay, laakiin marka la fiiriyo hadaladiisa iyo dhaqaala xumida Barcelona, ​​kala iibsiga ayaa umuuqda mid aan u badneyn sidii hore.
Previous articleBenzema oo maxkamad loo soo taagayo kaalintii uu ku lahaa fadeexadii ka dhacday Valbuena
Next articleArteta oo xaqiijiyay in imaatinka Rekik ee Arsenal lagu dhawaaqi doono ‘goor dhaw’